SUUQA: Man United oo kalsooni ku qabta iney lasoo saxiixan karto Aaron Wan-Bissaka & dalab kale oo ay miiska saartay. – Gool FM
Abdirashid Mohamud June 11, 2019
(England) 11 June 2019. Man United ayaa ku qasbanaatay iney sare u qaado lacagaha ay ku dooneyso xiddiga da’da yar Aaron Wan-Bissaka kaas oo daafaca midig kaga ciyaara kooxda Crystal Palace, dalabkii hore ayaa laga soo diiday balse markaan mid lama diidaan ah ayey miiska saareysaa.
Red Devils ayaa horay dalab 40 Malyan oo Pound ah uga gudbisay Aaron Wan-Bissaka balse waa lagu soo diiday, balse waxaa ka go’an iney hesho xiddigaan ka tirsan 21-jirada qaranka England.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa aaminsan in xiddigaan uu yahay xiddig ay kooxdiisa aad ugu baahan tahay isla markaana uu yahay mid ay muddo badan u baahneed kooxdiisa.
Antonio Valencia ayaa baxaya xagaagan, sidoo kalana kalsoonida lagu qabo Young iyo Dalot ayaan aheyn mid heer sare ah, sidaas darteed kooxda waxey dagaal ugu jirtaa iney keento wiilkaan wacdaraha kusoo bandhigay Crystal Palace.
Inkastoo Palace ay dooneyso iney 60 Malyan oo Pound ku iibiso xiddigeeda, hadana United waxey aaminsan tahay iney fursad fiican u heysato saxiixa xiddigaan iyadoo waliba bixineysa 50 Malyan oo Pound.
Dhanka kale Red Devils waxey quus ka istaagay raacdadii ay ugu jirtay saxiixa daafaca da’da yar ee Ajax Matthijs De Ligt kaas oo ay wali ku dagaalamayaan kooxaha Juve, PSG iyo Barcelona.
Wargeyska Le Parisien oo kashifay kooxda uu Antoine Griezmann ku biiri doono & Real Madrid oo aan ku farxin.